Ady an-trano - Wikipedia
Ny ady an-trano dia adin'ny vondrona roa na maro ao amin'ny firenena iray. afaka mitranga eo noho ny antony maro ny ady an-trano, ary misy antony roa mahazatra.
Ny voalohany dia ny vondrona samihafa tsy hitovy hevitra mikasika ny hoe iza no tokony ho tompon'andraikitra, na mikasika ny fomba tokony hitondrana ny firenena. Raha tsy mitovy hevitra mikasika ny vokatry ny fifidianana ny antoko politika roa, dia mety hitondra any amin'ny ady raha toa ka tsy afaka na tsy tonga amin'ny fifanarahana ny antoko roa tonta.
Ny faharoa dia satria vondron'olona tsy tia ho anisan'ny firenena iray intsony. Izany zavatra izany dia mitondra anarana hoe ady fisintahana. Maro ireo olona miaina ao amin'ny toerana iray mety tapa-kevitra amin'ny fahazoana fahaleovan-tena. Vitsy ireo mpitondra firenena handà hanome tany anjakany, ary mety ho ady ny vokatr'izany.
Indraindray ny olona izay te-miala tsy voatery te-hanangana firenena vaovao manontolo, fa mba te fizakantena bebe kokoa noho ny raharahany. Mitranga izany indraindray rehefa foko samihafa no ao amin'ny firenena iray ihany.
Ny ady an-trano dia mety handrava sy hanimba tahaka ireo ady ara-dalàna eo amin'ny firenena roa samy hafa. Mety hitondra takaitra eo nandritra ny taona maro ny ady an-trano. Izany dia noho ny ady mihasarotra vahana olana ary mahasamy hafa ny tena haingana ary mivadika. Ny ady an-trano dia mety hanomboka eo amin'ny lafiny roa, fa mety mirava ho tarika roa na maro ny tarika iray, ary mety mifampiady ireo tarika nisintaka ireo.
Mety ho lasa mpiady ny vondron'olona izay tsy tafiditra tao am-piandohana rehefa manomboka mahazo fitaovam-piadiana mba hiarovan-tena amin'ny andaniny sy ny ankilany. Efa nitranga ny ady an-trano nifampiadian'olona avy amin'ny vondrona maro.
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Ady_an-trano&oldid=694036"
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2014 amin'ny 18:10 ity pejy ity.